जितको खुशीयाली साँट्न पाइनन् नेपाल आइडलकी आमाले | Suvadin !
रविले व्यस्तताले गर्दा आफ्नो खुशी आमासंग साँटन पनि पाएका थिएनन्। आमाको लागि खुशीको सुन्दर घर बनाउने सपना उनले बुनेका थिए। उनले आमाको लागि कैयौँ सपनाहरु बुनेका थिए, ती सपनाहरु अँधुरै रहे।
Shared: 688 times | Share this on
काठमाडौं, १२ पुस - जीवनमा सुखदुख एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। कहिले खुशी त कहिले दुःख यो जीवनमा भइरहने प्रक्रिया हो। हामी मान्छेको चोला बगीजाने खोला उस्तै उस्तै हो।
एकदिन मर्नु त छ नै तर बिडम्वना मरण प्रतिकुल समयमा भइदिन्छ। यसले जीवनमा नमज्जा ल्याइदिन्छ। यस्तै नमज्जा भयो रवि ओडको जीवनमा पनि।नेपाल आइडल दोस्रो संस्करणका विजेता रवि ओडकी आमाको जब पानी तान्ने मोटरमा करेन्ट लागेर बुधबार मृत्यु भयो, यो खबरले रविलाई मात्रै होइन, उनका समर्थक सबैलाई मर्माहत बनाएको छ।
रवि ८ वर्षको उमेर छँदा नै उनकी जन्म दिने आमा संसारबाट विदा भएकी थिइन्। पछि आफ्ना सानै बच्चाहरुले दुःख नपाउन भनेर उनका बुवाले अर्की आमा विष्नालाई भित्र्याए। विष्नाले बच्चाहरुलाई कहिल्यै पनि मातृवात्सल्यको कमि हुन दिइनन्।
उनको मायाको छहारीमा रवि हुर्केबढे। उनी एक महान आमा थिइन् जसले कहिल्यै बच्चाहरुलाई सौतेलो ब्यवहार गरिनन्।
चरम गरिबीबाट पिल्सिएका रविले नेपाल आइडल बनेर पहिलो पटक घर फर्केपछि पनि उनले आफ्नी आमालाई अब हाम्रा सुखका दिन सुरु हुँदैछन भनेका थिए। रवि ओड वास्तवमै एकदमै संघर्ष गरि यहाँसम्म पुगे।
उनको गायनको प्रतिभालाई श्रोता एवं दर्शकहरुले कदर गरे, उनलाई भोट गरे जिताएर उनलाई नेपाल आइडल बनाए। उनले सबैको मन जित्न सफल भए। भनिन्छ नी मन जित्नेले जगत पनि जित्न सक्छ। त्यही भनाईलाई उनले यथार्थमा सावित गरिछाडे।नेपालको सबैभन्दा ठूलो रियलिटि शो, नेपाल आइडल सिजन २ मा उनले बाजी मारे।
गरिबीबाट मुक्तिका लागि उनका बुवा रोजगारीका क्रममा भारतमा काम गर्छन्। रविका बुवालाई भारतमा कामबाट विदा नमिलेका कारण उनले नेपाल आइडलको फिनाले हुने बेलामा पनि उपस्थित गराउन सकेका थिएनन्। त्यो बेलामा नेपाल आइडलमा जितपछि आफ्ना पीडादायी दिन सम्झेर रवि निक्कै भक्कानिएका थिए।
सुदूरपश्चिमको कन्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित टाउको निहुराएर छिर्न पनि मुस्किल पर्ने एउटा सानो टायलको झुपडीमा रवि जन्मिएका थिए।
वि.सं. २०५४ साल चैतमा टायलको त्यही सानो झुपडीमा जन्मिएका रवि बुवा राजेन्द्र र आमा उमा ओडका तेस्रो सन्तान हुन्। घरपरिवारलाई सहायता गर्न र घरखर्च धान्नका लागि उनी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भएका थिए।
बुधबार बिहान पानी तान्ने पम्पबाट करेन्ट लागेपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा अन्दाजी ४५ वर्षकी रवि ओडकी आमाको मृत्यु भएको थियो।
उनले कैलालीको अत्तरिया अस्पतालबाट सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी लैजाँदै गर्दा प्राण छोडेकी हुन्।
नेपाल आइडलको उपाधि जितेका रविले जितको खुसियाली मानाउँदै गर्दा उनको परिवारमा यो विपत्ति आइपरेको हो।
मंगलबार रवि ओडलाई भिमदत्तनगरपालिकाद्वारा कन्चनपुरमा भव्य अभिनन्दन गरिएको थियो। उनलाई भिमदत्त नगरपालिकाले ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत गरेको थियो।
यसैविच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उनको सम्मानमा धनगढीमा भव्य कार्यक्रम गरेको थियो। विहीबार उनलाई काठमाडौंमा पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो।
उनको जितमा केही मानिसहरुले क्षेत्रीयता हाबी भयो भनेर आलोचना गरेका थिए। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका चारैजना आइडलका दोबेदार मानिएपनि वास्तवमा उनलाई श्रोता एवं दर्शकले भोट गरेर जिताएकाले उनको जित निष्पक्ष जित थियो। किनकी उनको जन्मस्थल सुदूरपश्चिमबाट मात्रै हैन् उनलाई नेपालका पूर्वका जिल्ला र विदेशबाटसमेत भोट आएको थियो।